သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် (KuKu) email ကနေ ပို့လိုက်တာပါ။ ပုံတွေအများကြီး မတင်ချင်တာနဲ့ slideshare.net မှာ slideshow လုပ်ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရေးထားတာတွေကတော့ အရမ်းရီရတယ်။ ကြံကြံဖန်ဖန် ဘယ်သူထွင်ပြီး ရေးထားလည်းတော့ မသိဘူး။ ရေးတဲ့သူ ဟာသဥာဏ် တော်တော်လေးရွှင်တယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါဦး ... နောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် စဉ်းစားကြည့်ဦးနော် ဘယ်ပုဒ်မနဲ့ ငြိနေသလဲလို့ သတိပေးထားတာ တော်ကြာ အရေးယူခံနေရမှာစိုးလို့
Tags: myanmar joke, joke, myanmar humor, humor
Myo Kyaw Htun 7:31 am
ကိုချမ်းတော့ လျှော့ရက် ရကောင်းပါရဲ့ :P
CMS 7:58 am
အင်း ... မင်းနဲ့ အတူတူလောက် လွတ်မယ်ထင်တာပါပဲကွာ :P
Sai Linn Thu 8:00 am
CMS 8:03 am
စိတ်မကောင်းပါဘူး ညီလေးရာ ရှေ့နေငှားလည်း ရာဇ၀တ်ဘေးဆိုတာ ပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး .. အစ်ကိုတို့နဲ့သာ စခန်းကို ခဏလိုက်ခဲ့ပါ ... ဟိုရောက်မှ ရှင်းကြတာပေါ့ :P
naing 2:00 pm
ရယ်ရင်းနဲ့ ချောင်းဆိုးသွားတယ် ကို ချမ်းမြစိုး ။ အခုထိ ရယ်နေတုန်း ခင်ဗျာ ။
Nitu 2:27 pm
Hahaha. really funny...
kyawmintun 4:11 pm
ဟက်ဟက်ဟက် ......... ရှေ့နေရှာထားမှ
CMS 4:41 pm
nitu .. thx bro :)
Ko KMT ... ၀မ်းနည်းပါတယ် ကိုကျော်မင်းထွန်း ခင်ဗျား အလာကောင်းပေမဲ့ အခါနှောင်းသွားပါပြီ ခင်ဗျားဟာ ဥပဒေပုဒ်မ (၃/က) နဲ့ ငြိစွန်းနေတဲ့အတွက် တရားဥပဒေကပေးတဲ့ အပြစ်ဒဏ်ကို ခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့နေရှာမနေပါနဲ့တော့ ပင်ပန်းပါတယ် .. တရားနဲ့သာဖြေပါ :P ဟတ်ဟတ်
Myo Kyaw Htun 4:18 am
ကော့မန့်ပေးသမျှသူကို ဇွတ်ကို ဆွဲထည့်နေတော့တာပဲ။ ဘာဟဲဟ... ရဲအုပ်ကြီး ခြမ်းမျဆိုး လား ?
CMS 4:21 am
ညီလေး မြိုးကြော်ထွဏ်း ... မင်းအတွက် နောက်ပုဒ်မ တစ်ခုပိုသွားပြီ "၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှု" .. ကိုက တာဝန်အရ လုပ်နေရတာပါ :P
Phyo Maw 1:39 am
မူရင်းက ဝိဇ္ဇာနဲ့ဗျူးတို့ အတူတွဲထုတ်ခဲ့တဲ့
ခုပြန်ဖတ်တော့လည်း တော်တော်ရီရတာပဲ =D
CMS 11:30 pm